I-Cub Hill Cottage kwiCub Lake-I-LAKEFRONT YABUHLUNGU!
Le yindlu entle, yosapho kunye nekhaya lokurenta eholideyini ekwi-Cub Lake ecocekileyo ekwimpuma yeKalkaska, eMichigan! I-cottage inamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela agcweleyo ayi-2, kwaye ilala isi-9. (Qaphela ukuba sinciphisa umthamo wokurenta kubantu abadala abasi-8.) Inedesika enkulu enembono entle yechibi ukusuka kwinduli ehleli kuyo. Kukwakho nepropane grill entle ekwidesika efumanekayo ukuba isetyenziswe ziindwendwe.
Amagumbi amabini okulala e-cottage avuleleka kwibalcony entle yomgangatho wesibini enombono omangalisayo weCub Lake. Irenti yeholide ibandakanya idokhi yesikhephe, iikayak ezimbini, ibhodi yokubheqa, iphenyane, kunye nesikhephe esibheqayo - zonke zisecaleni lechibi labucala lepropathi! I-Cub Lake "yichibi elingavuswanga". Izikhephe zePontoon zivumelekile, kodwa ezinye izikhephe ezinemoto azivumelekanga. Iindwendwe zamkelekile kakhulu ukuba zize nezazo isikhephe sepontoon kunye/okanye iinqwelo zamanzi ezingezizo ezemoto kwaye zisebenzise idokhi yesikhephe sepropathi ukuxhoma. ICub Lake ilungile kwi-kayaking kunye nokuhamba ngephenyane kwaye zombini iCub Lake kunye neBear Lake ekufutshane zigqwesile ekulobeni i-bass kunye nebluegill. Kukwakho nomsesane womlilo omnandi kakhulu onezitulo elunxwemeni lwabucala ukuze ube nemililo kunye ne-s'mores elunxwemeni. Ebusika, iCub Hill ilungile kwi-sledding kunye nabantwana kunye nabantu abadala abakwazi ukuleyitha ukusuka kwidesika ukuya eCub Lake endulini.
Ngaphakathi kwi-cottage, i-cottage i malunga ne-1800 yeenyawo ze-square ngobukhulu kwaye amagumbi okulala ama-3 alala abantu abadala aba-7 ngokukhululekile kakhulu. Amagumbi amabini okulala aneebhedi ezilingana nokumkanikazi kwaye eyona inkulu kumagumbi amathathu okulala ineebhedi ezi-3 ezinobukhulu obungamawele. I-cottage ayinayo i-air-conditioning, kodwa onke amagumbi amathathu okulala anabalandeli besilingi kwaye kukho abanye abalandeli abakhoyo endlwini. Kukho kwakhona i-den / igumbi lokufunda kwi-cottage ene-futon kuyo, enokuthi ilale abantu abadala be-2. I-cottage inegumbi lokuhlala elihle elithokomeleyo elinomabonakude wescreen esisicaba. I-TV ye-cable esisiseko ibandakanyiwe (iitshaneli zenethiwekhi kuphela), kodwa i-cottage ixhotyiswe nge-WiFi ye-high-speed kunye nokusasazwa okuphilayo kufumaneka ngesixhobo se-Roku. Kukho ikhitshi elihle eligcwele ngokupheleleyo izinto zokupheka kunye nempahla yokutyela, zonke ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe ziindwendwe. Kukho indawo encinci yokuhlamba impahla enewasha yomthwalo ephezulu kunye nesomisi kufutshane nekhitshi. I-cottage inendawo yokutyela emnandi (ekufuphi nekhitshi kunye negumbi lokuhlala), kunye netafile yokutyela kunye nezihlalo zabantu abadala abayi-6. Ikhaya leeholide liyilwe kakuhle lijikeleze iCub Lake, linegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, kunye namagumbi okulala amathathu onke anembono yechibi.
Ngaphandle kwepropathi yeholide, le ndawo idume ngokuhamba ngekhephu, ukuloba, ukukhwela intaba, kunye nokuhlola indalo. Kukho iindlela ezibalaseleyo zokuhamba ngekhephu kunye neendlela zokuhamba intaba kufutshane. Eli khaya lokurenta iholide ngenene libonelela ngendlela emangalisayo yokubaleka usapho kubuhle bendalo basemantla eMichigan! I-cottage ibuye idume kakhulu kwizibini kunye namaqela amancinci.